တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Dongying ၌ သမ္မတရှီ ဆက်လက်စစ်ဆေး - Xinhua News Agency
ကျိနန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟို ကော်မတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ရှီကျင့်ဖိန် သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ်၊ Dongying မြို့၌ စစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ရှီသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ၊Shengli ရေနံမြေ အတွက် ရေနံရှာဖွေရေးသုတေသနဌာနနှင့် တူးဖော်ရေး ပလက်ဖောင်းများဆီသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ်၊ Dongying မြို့၊ မြစ်ဝါမြစ်၏မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ မြစ်ဝါမြစ်ဝှမ်း ၌ မြစ်ဝါမြစ်၏ရေလမ်းကြောင်းများအားစစ်ဆေး၍ မြစ်ဝါမြစ်၏ ဂေဟစနစ်ကာကွယ်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
၎င်းသည် ဆားငံ-အယ်ကာလီမြေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြစ်ဝါမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မြစ်ဝါမြစ်၏မြစ်ဝှမ်း၌နေထိုင်သူများအားနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း နှင့် Shengli ရေနံမြေ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု တို့ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xi continues inspection in east China’s Dongying
JINAN, Oct. 22 (Xinhua) — Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, on Thursday continued inspection in the city of Dongying, east China’s Shandong Province.
Xi visitedahigh-tech demonstration area for agricultural industry, andaresearch institute of oil exploration andadrilling platform of the Shengli Oilfield.
He checked on the comprehensive use of saline-alkali soil and the development of modern agriculture in the Yellow River Delta, the relocation of residents in the flood plain of the Yellow River, and the innovative development of the Shengli Oilfield. Enditem